Sunday, 04.05.2020, 10:40pm (GMT+5.5) Home Contact
राजनीतिको मर्म नबुझ्दाको परिणाम - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 05.14.2013, 02:24pm
राजनीति गर्नेहरू कर्मयोगी बन्नुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक नेताले नित्य गीतापाठ गर्नुपर्छ जसबाट उसको बुद्धि विकसित भएर राम्रो काम गर्ने क्षमता आउँछ । कुनै नीति र मानवताको अनुभव नभएका व्यक्ति राजनीतिमा खेल्न थाले भने ती सुविधाभोगी भएर स्वार्थसिद्धिमा लाग्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग : समृद्धिको आधार - यादब देवकोटा
Tuesday, 05.07.2013, 07:53am
अहिले जसरी विश्वव्यापी रुपमा तापक्रम बढिरहेको छ र जलवायुमा परिवर्तन आइरहेको छ यसले नेपाल जस्ता प्रकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुकमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यो मुलुकको सुखद् भविष्यका लागि ठूलो चुनौति हो किनभने नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि यहाँका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग नै हो । यसका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
बेथितिको पराकाष्ठा र निरीह सरकार - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 05.07.2013, 07:52am
घरायसी काम, मील कारखानाका काम, मजदुरी, भरियागिरि यस्तै यस्तै काम ज्यालादारीमा चलेका हुन्छन् । तर हिजोआज त्यस्ता काममा पनि राजनीति पसेको छ । कसैलाई कुनै कामका लागि ज्याला दिने गरी बोलाउनोस् भोलि उसले मैले यहाँ सधैं काम पाउनुपर्छ अर्थात् स्थायी हुनुपर्छ भनेर ढोकामा सुत्यो भने नेताले हो हो हुनैपर्छ भनिदिन्छन् ।
अब के हुन्छ ? यस्तो हुन सक्छ ? - तारा सुवेदी
Tuesday, 05.07.2013, 07:49am
यसै स्तम्भमा यस पहिलेका लगातारका छ अंकमा देशको वृहत्तर हालतको परिवेश परिदृश्यका केही प्रतिनिधि उदाहरण सहित चर्चा गरिएको थियो । कुन कुन अंकमा के कति कुरा उठाइएको थियो भनेर फर्किएर चर्चा गर्ने हो भने अगाडि बढ्ने मुराद पूरा हुन सक्तैन । यद्यपि देशको परिस्थिति, त्यस्तो परिस्थितिको उत्पत्ति र उपस्थितिको पछाडिका समग्र कारक तत्वको ‘यत्किञ्चित्’ वा शतांश पनि विगतका अंकमा समेटिन सकिएको छैन भन्ने आत्मबोध नभएको होइन ।
अगाडिकै बाटो त नदेख्नेले पछाडिको भीर के देखुन् - यादब देवकोटा
Monday, 04.29.2013, 07:14pm
राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा वा आम जनताको सरोकार रहने विषयहरूमा आम सहमति वा एकमत कायम हुन सकेन भने कुनै पनि मुलुकको दुर्भाग्यको सूचक त्यही हुन्छ भन्ने प्रमाण नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सिद्ध गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले जकडिएको नेपालको आर्थिक–सामाजिक अवस्था मात्र अधोगतितिर लागेको नभै मुलुकको भविष्य नै एक संकटोन्मुख छ । विदेशीको इशारामा, विदेशीकै चाहना अनुसारका राजनीतिक गतिविधि संचालित हुँदा राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा त परेकै थिए अब राष्ट्रिय स्वाधीनता नै संकटमा पर्ने आशंकाजन्य चिन्ताहरू व्यापक रुपमा उठिरहेका छन् ।
आजको स्थिति र हामीले बुझ्नुपर्ने तत्व - महेश्वर शर्मा
Monday, 04.29.2013, 07:13pm
हिजो सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा राजनीतिक दल गठन हुन्थे र आफ्नो आस्था र विश्वास भएको दलमा सामेल हुने स्वतन्त्रता थियो तर आज ? आज त्यो स्थिति एक प्रकारले समाप्त भएको छ । आज त जात, धर्म र प्रान्तका मान्छे संगठित हुन थालेका छन् ।
अब के हुन्छ ? नोकरशाही सरकारमा पनि भरपर्छ (६) - तारा सुवेदी
Monday, 04.29.2013, 07:10pm
प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएको सात वर्षपछि हेर्दा न प्रजातन्त्र छ न “लोकतन्त्र” । न संविधान जीवन्त छ, न निर्वाचित सरकार नै छ । यद्यपि अहिले राजनीतिक दलका अगुवाका फेटा गुतेर विना पूँजी र विना जोखिमको छिटै असीम आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने देखेर पार्टीको नाममा कम्पनी खडा गरेकाहरू “प्रजातन्त्र” शब्द सुन्न चाहन्नन् । त्यसलाई सामन्ती राजतन्त्रको अवशेष भनेर भन्ने गर्दछन् ।
सीमा अतिक्रमण, बाँध आतंक र तराइवासीको पीडा - यादब देवकोटा
Monday, 04.22.2013, 06:52pm
सीमा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने गरी भारतले अनेक गतिविधि चलाइरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेता, सत्तामा बसेकाहरूले सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । सत्तामा बस्दा र सत्ता बाहिर रहँदा राष्ट्रियतासंग सम्बन्धित विषय नै फरक पर्ने गरेको पीडादायी अनुभव नेपाली जनताले गर्नुपरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको भारतपरस्त सोचकै कारण नेपाल असुरक्षित बन्दै गएको मात्र होइन साँघुरिंदै जाने क्रम निरन्तर जारी छ । नेपाललाई आफ्नो पकडमा पार्ने रणनीतिक योजना अनुसार नै सीमावर्ती क्षेत्रमा बाँध बाँधेर नेपाललाई डुबानमा पार्ने दीर्घकालीन नीतिले काम गरिरहेको छ ।
नेताहरूले त बुद्धिसम्मत काम पो गर्नुपर्छ - महेश्वर शर्मा
Monday, 04.22.2013, 06:51pm
गतिला नेताले देशलाई हानि हुने काम गर्दैनन् । तर नेताका नाममा कलंक लगाउनेहरू यहाँ धेरै भए । कसैले पनि आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने महानता देखाएको यहाँ पाइदैन । इतिहासमा जोकसैको पनि उद्र्ध वा अधोगति भएको छ भने त्यो आफ्नै कारणले भएको छ । यो यथार्थलाई बिर्सेर अरुलाई दोष दिनु बेकार छ । नेतृत्वकै बेइमानी र स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै रुपमा अधोगतिमा छन् ।
अब के हुन्छ ? (५) - तारा सुवेदी
Monday, 04.22.2013, 06:46pm
दूरदर्शी, असल, इमान्दार, प्रतिबद्ध र नैतिक वल भएको राजनेता हरेक देशमा जुनसुकै देशमा पनि सधै जन्मिने होइन । कुनै देशमा कुनै कालखण्डमा समयको पुकार सुनेर जन्मिने लाखौं व्यक्तिमध्ये एक दुई जना मात्र राजनेता बन्न सक्ने रहेछ ?
नयाँ वर्षमा सबैले गर्नुपर्ने प्रण - यादब देवकोटा
Tuesday, 04.16.2013, 07:46am
नेपाली जनताको चाहना थियो वर्ष २०६९ साल जेठ १४ भित्र मुलुकले जनमुखी संविधान पाउनेछ । तर ११ महिना अघि मुलुकले संविधानसभाबाट संविधान पाउने दिन संविधानसभाकै विघटन भयो । राजनीतिक नेताहरूको खिंचातानी र सत्ता स्वार्थको फोहोरी खेलले ऐतिहासिक संविधानसभा विघटनको शिकार भयो । यो कुनै एक पक्षको मात्र दोषको कारणले नभै आफूलाई प्रमुख भनेर मुलुकको बाग्डोर लिएका चार दलका शीर्ष नेताहरूकै अकर्मण्यताका कारणले हो ।
उपलब्धि केलाई र विध्वंश केलाई भन्ने ? - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 04.16.2013, 07:45am
ठूला भनाउँदा पार्टी नेताहरूको गतिविधि सही दिशामा नगैदिनाले आज देश नै बदनाम भएको छ । आन्तरिक कमजोरीको फाइदा उठाएर बाहिरी तत्वले निर्वाध खेल्ने मौका पाएका छन् । नेता र पार्टीहरूलाई एक अर्का बिरुद्ध खेलाएर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न पाएका छन् । विदेशीलाई खुसी नपारी कुर्सी पाइन्न भन्ने दरिद्र मानसिकता भएकाहरू आपसमै बाझेर पराइका विश्वासमा हिंडेका छन् ।
अब के हुन्छ ? (४) तारा सुवेदी
Tuesday, 04.16.2013, 07:40am
“निरंकुश तानाशाही शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था”को स्पष्ट पार्थक्य भनेकै विधि विधानको सर्वोच्चता र व्यक्ति (शासक) को स्वविवेकको सर्वोपरिता कुन कुरालई राज्यले अंगीकार गरेको छ ? त्यही नै त्यसैको मानदण्ड हो ।
साधना गलत भए साधककै पतन निश्चित - वेदराज पन्त
Tuesday, 04.09.2013, 07:14am
कुनै पनि कुराको प्राप्तिका लागि साधना आवश्यक हुन्छ । साधना गलत उद्देश्यले गरियो भने त्यसले दिने परिणाम पनि गलतै हुन्छ । तन्त्र साधकहरू भन्छन्– कुनै पनि तन्त्रलाई विधिवत् साधनाद्वारा जागृत गर्नुपर्छ । अन्यथा साधनाबिनाको तन्त्रले खासै केही गर्न सक्दैन । अर्थात् तन्त्र साधनाको विधिविधान छ । तन्त्र भनेकै विधि हो । यसलाई पनि विधिवत् साधना गरेपछि मात्र जागृत हुन्छ अन्यथा तन्त्रले केही तातोपानी लगाउँदैन ।
चारैतिर नेताहरूको इमान र नैतिकतामाथि प्रश्न - यादब देवकोटा
Tuesday, 04.09.2013, 07:12am
मुलुकले राजनीतिक परिवर्तनको दैलो ऐतिहासिक रुपमा उघार्यो तर यसको अनुभूति सकारात्मक हुन सकेको छैन । अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राजनीति हाँक्ने नेताहरूको चरित्रमा सुधार नआउँदा मुलुक इतिहासमै सबभन्दा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विकास, उन्नति र जनताको एकतामाथि अकल्पनीय प्रहार भएको छ । यसको निवारण कसरी हुने हो पत्तो छैन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सवालमा कुनै सकारात्मक कदम चालिएको छैन ।
के चुनाउ हुन्त छ ? धेरैको प्रश्न यही छ आज - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 04.09.2013, 07:11am
देशको चौतर्फी विकासका लागि नभै नहुने तत्व असल शासन हो । सुशासनले पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबोध गराउनुको साथै शासनप्रति जनतामा विश्वास जगाउँछ । जनताको चाहना नै असल शासन हो भने सरकारको उद्देश्य पनि जनतालाई सुशासन दिनु हो ।
अव के हुन्छ ? (३) - तारा सुवेदी
Tuesday, 04.09.2013, 07:09am
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टमा नेपाल यतिऔँ भ्रष्ट मूलुकमा परेको छ । र नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा यो यो परेको छ भनेर उल्लेख गरिएको तथ्यांक सार्वजनिक हुन थालेको सायद डेढ दशक पहिले हो झैँ लाग्छ । त्यसबेला आफूले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका बारे त्यति सुनेको थिइन । तथापि आफ्नो अनुमान मिल्दो तथ्यांकले आफूलाई ट्रान्सपरेन्सी प्रति आसा र विश्वास जगाएको थियो ।
बाघ संरक्षणको वर्तमान अभियान र परापूर्वको परम्परा - यादब देवकोटा
Monday, 04.01.2013, 06:57pm
केही समययतादेखि नेपालका पर्यावरणविद्हरूका लागि सुखद् समाचारको संचार भएको छ । यसपटक सुरु गरिएको बाघ गणनाबाट नेपालमा बाघको संख्या बढेको अनुमानका समाचारहरू सार्वजनिक भएपनि बाघ संरक्षणमा नेपालले फड्को मारेको देखिएको छ । यो अनुमान मात्र हो । गणनाका पूर्ण विवरण नआइकन यसै भन्न सकिन्न । आज विश्व नै हिंस्रक वन्यजन्तु बाघको संरक्षणमा जुटेको छ । वैदिक संस्कृतिमा बाघलाई शक्तिकी देवी दुर्गा भवानीको वाहनका रुमा मान्यता दिएर यसलाई ईश्वरतुल्य ठान्दै यसको संरक्षण हुनुपर्ने थिति बसालिएको थियो ।
दलीय खटनपटन र चुनावी सरकार - महेश्वर शर्मा
Monday, 04.01.2013, 06:56pm
यतिखेर प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारलाई अधिकांशले स्वागत गरेका छन् । त्यसको एकमात्र कारण राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्य हुने आशा हो । तर के निर्वाचनपछि स्थिति सुध्रिएला ? आशा त गर्नैपर्छ तैपनि विश्वस्त हुन गाह्रै छ । किनभने जुन कारणले अघिल्लो संविधानसभा कामै नगरी समाप्त पारियो, अब पनि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार भेटिंदैन । तिनै पुराना कारण जस्ताका तस्तै छन् र तिनको निराकरणतर्फ बेलैमा नसोच्ने हो भने अझ चर्को रुपमा आउनेछन् ।
“अब के हुन्छ ?” (२) - तारा सुवेदी
Monday, 04.01.2013, 06:54pm
गएको अंकमा यस विषयमा धेरै कुरा आइसकेको भए पनि प्रश्न पूरा थारै रहेको थियो । यद्यपि दशवटा अंकमा त्यस विषयमा बहस चलाए पनि ‘इदमित्थम्’ जवाफ आउन वा संभावनाबारे प्रक्षेपण गर्न सकिने छैन । जति विश्लेषण संश्लेषण गरिए पनि सम्भावना बारे प्रक्षेपण गर्न नसकिने ठोस कारण छ ।
» पानी र खाद्यान्नको संरक्षण अहिलेको प्रमुख चुनौति- यादब देवकोटा
» प्रधान न्यायाधीश कसैको होइन, सबैको हो - महेश्वर शर्मा
» अब के हुन्छ ? जिज्ञासा सबैको, उत्तर दिने को ?(१) - तारा सुवेदी
» विश्व पानी दिवसको सन्दर्भ : व्यापारिक सोच र एकाधिकारवादी प्रवृत्ति घातक - यादब देवकोटा
» चुनावी सरकार : नयाँ अध्याय आरम्भ - महेश्वर शर्मा
» परम सर्वोच्च सार्वभौम जनअदालतमा पेश गरेको खुला रिट निवेदन - तारा सुवेदी
» सहमति र सहकार्यको नाममा राष्ट्र झन् कमजोर- यादब देवकोटा
» ठालूहरुको महत्याई रहेसम्म यस्तै हो - महेश्वर शर्मा
» आउदो निर्वाचनमा “संविधान” रोज्ने कि “प्रतिनिधि” - तारा सुवेदी
» समयमै उपयुक्त नीति नबने थेग्नै नसक्ने विनाश - यादब देवकोटा
» राजनीतिक तुवाँलो फाट्न बाँकी नै छ महेश्वर शर्मा
» निर्वाचनभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय - तारा सुवेदी
» निष्काम सेवा र शिवरात्रि —	हेम शर्मा पोखरेल
» राजनीतिक सिण्डिकेट अन्त्य नभएसम्म निकास असम्भव : यादब देवकोटा
» देशलाई गाड्ने–उठाउने नेतृत्वमै भरपर्छ - महेश्वर शर्मा
» देश र देह एकैसाथ दुखिरहेको बेला - तारा सुवेदी
» अफिमची– गफ, सहमति र निर्वाचन - तारा सुवेदी
» राष्ट्रियता नै नरहे जनवाद कहाँ लागू गर्ने ? - यादब देवकोटा
» के यस्तै हुन्छ राष्ट्रिय स्वाभिमान ? - महेश्वर शर्मा
» अन्तरिम संविधान लौरो न हतियार - यादब देवकोटा
Page 15/21: « :: ... 12 13 14 15 16 17 18 ... :: »